I-biography ye-Lady Gaga ayiyona into engavamile. Ngesibonelo sakhe, wabonisa umhlaba ukuthi intombazane emndenini ocebile ingazibiza kanjani emhlabeni wonke. Ngenhloso enhle futhi ephikelela, wabeka indlela yakhe yokudumisa, naphezu kokugxekwa nokuhlekwa usulu. Ukuba ngumuntu onesipiliyoni, waba namakhono omculo nokwenza kusukela ebuntwaneni bakhe. Emuva esikoleni, u-Lady Gaga waqala ukuphuma esixukwini. Wayengathandi ngempela omunye umuntu. Njengoba ebenesibindi esikhulu, inkanyezi yesikhathi esizayo yesehlakalo yavela ngesithombe sakhe, isitayela sakhe sokugqoka futhi ayesabi ukuyibonisa kwabanye. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, umphakathi wazisa inselela yakhe yokugqoka, okwenza omunye wabaculi abadumile kakhulu. Kodwa mayelana nakho konke okuhlelekile.
I-Aries esignweni yezinkanyezi, eyazalwa ngonyaka we-Tiger (ngoMashi 28, 1986), inkanyezi yesikhathi esizayo yesigameko esitholwa lapho izalwa igama elihle likaStephanie Joanne Angelina Germanotta. Unomunye udade, uNatalie, oneminyaka eyisithupha ubudala. Lapho uStephanie engumfana omncane, abazali bakhe basebenza kanzima ukuze babe nemali emndenini. Ubaba, uJoseph Germannotta wayengumdayisi we-inthanethi, futhi unina, uCynthia, wasebenza ensimini yezokuxhumana. I-biography ka-Lady Gaga iphawula ukuthi amalungu omndeni wakhe awaveli emibuthanweni ephakeme yomphakathi. Ngakho-ke, ukusebenza amahora ayishumi nambili ngosuku kwakuyimfuneko evamile. Ukuzikhandla nokuqina kwakhe, ngokungangabazeki wazuza njengefa kubazali bakhe.
Ukuzalwa kwengane kaStephanie
Kusukela esemncane u-Lady Gaga waqala ukuhileleka emculweni. Lapho eneminyaka engu-4 wafunda ukudlala upiyano ngaphandle kosizo lwangaphandle, nangendlebe. Lapho esemusha, waqala ukuqamba izingoma ngokwakhe. Eminyakeni engu-11 ngangena esikhwameni se-Sacred Heart, esikoleni samabanga aphansi samaRoma Catholic. Lapho uqale ukuhlukana namanye amantombazane ngendlela yokugqoka nokuziphatha. Ngezinye izikhathi, uStephanie wayehlekwa usulu ngabafundi, kodwa akuzange kumkhathaze nhlobo. Kusukela eneminyaka engu-14 ubudala wadlala eqenjini, futhi esikoleni esiphakeme waqala ukuhlanganyela ngokugcwele emikhiqizweni yesikole yaseshashalazini. Wayenendima ezithakazelisayo, phakathi kwayo kwakuyi-Anna Andreevna kaGogol owayevela kuMhloli WezeMpilo. Ngemva kokuphothula iziqu, uStephanie Germannott wangena eSikoleni Sokubuciko, esasiseNyuvesi yaseNew York. Lapho ufundela umculo futhi athuthukise amakhono akhe okubhala ngokusebenzisa izinhlobonhlobo nezinhlobonhlobo zenkolo, ubuciko, ezombangazwe. Naphezu kokutadisha okuphumelelayo, umculi wayenomuzwa wokuthi uthuthukile ngokwengeziwe nangokwakheka kunabalingani bakhe. Ngakho-ke, wanquma ukugxila emsebenzini wakhe womculo, eshiya izifundo zakhe ngonyaka wesibili.
Izinyathelo zokuqala esiteji
Khona-ke i-biography ka-Lady Epatage isitshela ukuthi, lapho ihlala endlini encane, u-Lady Gaga waqala ukufeza izinhlelo zakhe. Okokuqala wabhala izingoma eziningana ze-audiobook, wabe esenza iqembu lakhe, ethatha abangane baseNew York University. Leli gama labizwa ngokuthi "uStephanie Germantottaz Band" futhi laqala ukuqhuba kumaqembu ahlukahlukene. Umculi wazama ngazo zonke izindlela ukuthi akhangele izethameli, aqhubeke esiteshini ngama-short and sequins. Iqembu lakhe lidlale kokubili imisebenzi eyaziwa kakade, kanye nomlobi. Ngokushesha waqaphela umkhiqizi uRob Fuseri, futhi ngaleso sikhathi kwakunezingxabano ezimbalwa, phakathi kwabo "iDurti Ice Cream", "Disco Haven" ne "Beauty Deptha Rich". Ngesikhathi esifanayo, umculi wakhe, Lady Gaga, wabonakala. Ngokombiko owodwa, umthombo wokuphefumlelwa kwaba ukwakheka kweqembu elithi "Quinn", elibizwa ngokuthi "i-Radio Gaga". Kwabe sekukhona inkontileka emfushane ne-studio ethi "Def Jeam". Ngemva kwezinyanga ezintathu waqothuka, kwadingeka abuyele ekhaya emndenini. Kwakungeyona inkathi elula empilweni yakhe. Ejabule ngemiboniso ethile ye-burlesque, wadansa ukuhamba e-nightclub e-Lower East Side. Njengoba umculi ngokwakhe ekhumbula, ngaleso sikhathi wayegqoke ama-bikini angaphezu kweyodwa. Ngokusobala, ngakho-ke ukungabi nokwesaba ukukhombisa umzimba wakho nokwenza izingubo ezimbi kakhulu. Ngokushesha uhlangana nodade we-Lady Starlight owaziwayo ngaleso sikhathi, osiza ukucabanga nokuhlanganisa isithombe esingajwayelekile. Bobabili basebenzelana ndawonye okwesikhashana, bahlanganyele emisebenzini eminingi yokudansa.
Ngo-2007, ekugcineni, ekugcineni, uveza umculi indoda ekwazi ukubona ithalenta elikhulu futhi uphethe isivumelwano naye. Kwakuyi-rapper edumile nomnikazi we-Akon inkampani yokurekhoda. Bonke bazama ukuhlanganisa izikhombisi-ndlela zomculo eziningana kumsindo omusha ovumelanayo. I-Glam-rock, izingobho ze-hip-hop nedwala 'n' roll lihlangene, kudala umsindo oyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, ukuthatha njengesisekelo isithombe esivele sikhona, umculi u-Lady Gaga wayehlale enesifiso sokuwuhlanganisa ngezitayela ze-Retro nezandulela-phambili. Ngenxa yalokho, isithombe esisha ngokuphelele nesingqayizivele savela. Nakuba ngesikhathi sokusebenza kanzima eLollapalouza ubeke ukuphawula ekubukeni, okufushane kakhulu kwakungu-shorts kuso. Nokho, yena kuphela ngamabutho amasha aqala ukurekhoda i-albhamu yakhe.
Ngonyaka owodwa wayesevele ehlala eLos Angeles, futhi eseqedile ukusebenza ekuqoqweni kwe "The Fame", okuyinto empeleni eyenza uStephanie Germannottu odumile emhlabeni wonke. I-biography ye-Gaga ibonisa ukuthi, ngenxa yokuzithemba nokusebenza okungapheli, ungayifinyelela impumelelo oyifunayo. Futhi, endleleni, umculi weluleka abalandeli bakhe ukuba bahlale bevuka, uma kwenzeka ukujikijela phansi.
Ukuxoxisana nomshushisi u-Alexander Pryanikov
UPawulu uzodlala uPlato
Umlando weDolce neGabbana
Umethuli we-TV owaziwayo uLydia Taran
Umklami wezithombe uSlava Zaitsev
Umlingisi uValeria Kiseleva
Izinkanyezi zokubonisa ibhizinisi nezinja zabo
I-ultrasound ngesikhathi sokukhulelwa
Yini engiyidingayo ukuze ngiyazi uma ngikhetha usawoti ididididi?
Umlando wokubonakala kwekhofi
Ungabonisa kanjani imizwa yabo yamahlumela
Izindlela ezingezansi zokwelapha. Okuthile mayelana nokuxilongwa, i-yoga nezinye ...
Izesekeli zesekhwalithi ekwindla-ebusika 2013-2014
Amathoni amafashini entwasahlobo-ehlobo 2016: izitayela zamanje kanye namamodeli
Izindlela zokupheka ezidume kakhulu
Ungadliwa izitsha ezinempilo kodwa ezihlwabusayo
Amakhekhe ngobisi i-caramel no-cream ushizi
Yimuphi umbala wehlobo?
Le mithetho engu-4 izosiza ukusheshisa umzimba wakho
Ukuhleka, ukulinganisa ukudla
Yini okudingeka ubelethe ingane enempilo?
Imincintiswano ye-Halloween esikoleni, ekhaya emcimbini, eqenjini. Imidlalo yase-Halloween yabantwana, intsha kanye nabafundi